Doorashada Jubbaland 2019 : Isfaham waaga oo sii xoogaysanaya - BBC News Somali
Doorashada Jubbaland 2019 : Isfaham waaga oo sii xoogaysanaya
Axmed Maxamed Islaam, Madaxweynaha Jubbaland oo ay garab socdaan koox wasiiro ah, uuna dabo socdo guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland
Muddo saddex bilood ah ayaa ka haray xilligii loo qabtay in ay dhacdo doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbaland, balse ka hor intii aanan la bilaabin hawshii isku-duba ridka doorashada ayaa waxaa soo baxaya muran la xiriira doorashada.
Habraaca xulista xildhibaanada
Soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland waxa ay ahayd in ay qabsoonto bishii lasoo dhaafay ee April, illaa haddana ma cadda xilliga kama dambeysta ah ee xulista lasoo afjarayo.
Wuxuuse marka koowaadba muran ka taaganyahay habraaca xulitaanka xildhibaanada.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in go'aanka kama dambeysta ah ee qofka xildhibaanka noqonaya uu leeyahay guddiga.
"Odayga beesha ayaa isaga oo la tashanayaa odayada kale ee beesha ayaa waxa uu keenaya saddex qof oo mid ka mid ah uu yahay xildhibaankii hore ee beesha, balse inta aysan keenin ka hor waxaan dajinaynaa sharuudo laga doonayo qofka noqonaya xildhibaanka anaga ayaana dajinayna habka, maamulka jirana go'aan kuma laha ee waxaa xulanaya guddiga doorashada." Ayuu yiri Xamse Cabdi Barre.
Liibaan Maxamed Coloow waxa uu ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee Jubbaland, waxa uu BBC-da u sheegay in habraaca lasoo bandhigay uusan ahayn mid sax ah oo u cuntamaya musharixiinta isbadel doonka ah.
Musharrixiinta Jubbaland ma amni ayay isku hayaan mise kursi?
Jubaland: Xaasaska Shabaab ha isaga baxaan Kismaayo
"Habraaca hadda muuqda ma ahan mid sax ah runtii, sababtoo ah sida caadiga ah waa in xildhibaanka qofka noqonaya ay soo xulaan odayaasha dhaqanka, balse sida aad ka maqasheen guddoomiyaha guddiga doorashada, in odayaasha ay soo gudbin doonaan saddex magac, mid ka mid ahna iyaga guddiga ah ay kasii xulan doonaan , marka waxaad mooddaa in guddiga doorashada aysan taasi shaqadoodii ahayn".
"Guddi doorasho waa la yaqaanaa waa garsoore labo qof oo tartamaya, meel ay iyaga kasoo gali karaan in ay xildhibaanka soo xulaan ma jirto" ayuu yiri Liibaan oo sidoo kale ku hadlay magaca gole ay leeyihiin musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada Jubbaland.
Sheekh Daahir waa mid ka mid ah musharixiinta madaxweynenimada Jubbaland ayaa isaga oo ku sugan magaalada Kismaayo waxa uu sheegay in aysan aqbali doonin habraaca ay guddiga soo bandhigeen.
Shaqaaqo ka dhacday Kismaayo
Shalay waxaa magaalada Kismaayo ku laabtay Cabdinaasir Seeraar Maax oo horey u ahaa afhayeenka Jubbaland, balse hadda sheegay in uu u taaganyahay xilka madaxtinimada.
Warar lagu kalsoonyahay ayaa BBC-da u xaqiijiyay in ay israsaasayn dhex martay ciidamo daacad u ah Seeraar iyo kuwa Jubbaland kadib markii Seeraar lagu wargaliyay in la baarayo boorsooyin uu watay.
Shaqaaqadaas ayaa waxaa ku dhaawacantay afar askari, iyada oo Cabdinaasir Seeraar uu falkan ku eedeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
Balse war qoraal ah oo kasoo baxay Jubbaland xalay saqdhexe ayaa lagu sheegay in qalqal la galinayo amniga magaalada Kismaayo, waxaana eedda dusha looga tuuray dowladda federaalka.
Marka uu qoraalkan soo baxayo, waxaa magaalada Garoowe uu shir uga socdaa madaxda ugu sareeysa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada muddo 6 maalmood ah.
Illo lagu kalsoonyahay ayaa BBC-da u sheegay in madaxweynaha Jubbaland uu shirkii Garoowe isaga baxay kadib markii ay dhacday is rasaasayntii Kismaayo. Axmed Maxamed Islaam ayaa dhowaan sheegay in Muqdisho laga soo abaabulayo falal lagu waxyeeleynayo amniga Jubbaland.
Kaalinta dowladda federaalka ah
Guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland waxa uu BBC-da u sheegay in xiriir wada shaqayn ah uusan ka dhaxaynin guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka federaalka, iyaguna ay u madax bannaanyihiin in ay qabtaan doorashada Jubbaland.
Waxaa muuqata in aysan jirin wax kaalin ah oo muuqata oo dawladda federaalka ku leedahay doorashada Jubbaland laga qabanqaabinayo.
Sharciga doorashooyinka uu meelmariyay baarlamaanka Jubbaland ayaa kaalin korjoogto oo kaliya siinaya wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo mas'uuliyadaheeda ay ka mid tahay arrimaha dowlad goboleedyada.
Bishii lasoo dhaafay waxaa dhacay wadahadalo maalmo badan qaatay oo magaalada Muqdisho ku dhexmaray madaxda ugu sareysa dowladda federaalka iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, haseyeeshee kulamadii ayaa soo xirmay iyada oo aanan laga soo saarin wax lagu heshiiyay.
Jubbaland waxa ay sheegtay in amniga doorashada ay mas'uul ka yihiin ciidanka maamulka, waxaana arrintaas ka mid ah xitaa amniga musharixiinta in ay illaalin doonaan ciidanka.
Musharixiinta oo mar sii horeysay soo saaray qoraal wadajir ah ayay arrintaas ku diideen, waxayna sheegeen in aysan ku kalsoonayn qaabka loo maamulayo amniga doorashooyinka.
Waxaa magaalada Kismaayo ku sugan ciidamada AMISOM oo ka kala socda dalalka Kenya, Itoobiya iyo waliba Burundi, waxaa aad loo hadal hayaa in laga yaabo in amniga doorashada ay la wareegaan ciidamada AMISOM si ay fursad isugu mid ah u helaan musharixiinta iyo madaxweynaha hadda jooga oo aad loo filayo in uu isna yahay musharax.
42 Daqiiqadood ka hor